Uyifaka njani iNtetho yePowerPoint kuYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifaka njani iPowerPoint intetho kwi-YouTube?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 378
Ngaba unayo intetho yePowerPoint kwaye ufuna ukwabelana ngayo kwiYouTube? Kwinqaku lethu namhlanje siza kufundisa ukuba ungayenza njani ngendlela elula kwaye ekhawulezayo. Ukuthumela intetho kuleqonga kuya kunceda abantu abaninzi ukuba bayibone kwaye bonwabele umxholo wakho.
IPowerPoint iyaqhubeka ukuba sesinye sezixhobo ezisetyenziswa kakhulu ngabantu ukwenza imiboniso enomtsalane nenomdla. Ukuba sifuna ukwabelana ngeYouTube, kufuneka sifunde kuqala indlela yokuthumela ngaphandle umboniso kwifomathi yevidiyo. Apha sichaza yonke into kuwe.
Thumela ngaphandle umboniso njengevidiyo
Ukuba ucinga ngombono wokulayisha i-PowerPoint ntetho kwisiteshi sakho seYouTube Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuthumela ngaphandle umboniso kwifomathi yevidiyo. Ke unokuyilayisha kwisitishi sakho kwaye wabelane ngayo nabo bonke ababhalisile.
Ukuthumela umboniso njengevidiyo akunzima kangako Uqinisekile kangakanani ukuba ucinga. Iya kuthatha amanyathelo nje ambalwa kwaye siya kuyiguqula ingxelo yethu ibe yividiyo.
Inyathelo lokuqala lokulandela iya kuba vula iPowerPoint kwikhompyuter yakho. Ungasebenzisa ibha yokukhangela ukufumana usetyenziso ngokukhawuleza.
Kwimeko apho sele unawo umboniso wePowerPoint owenziweyo kwaye wagcinwa kwiPC yakho, konke ekufuneka ukwenzile kukukunika cofa kabini kwifayile ukuze uyivule.
Cofa kwi "Ifayile"
Nje ukuba ungaphakathi kwiTemplate yePowerPoint kufuneka ucofe iqhosha "Oovimba”Ifunyenwe kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini. Emva koko khetha u- "Vula" ukuvula ifayile esele ikho okanye "iNew Presentation" ukwenza entsha.
Khetha "ukuthumela ngaphandle"
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Ukuthumela ngaphandle"Kwaye emva koko ucofe apho ithi" Yenza ividiyo ". Apho kuya kufuneka ufunde ubumbeko kwaye uhlengahlengise ngokokubona kwakho. Emva koko kufuneka ukhethe "Yenza ividiyo"
Thumela ngaphandle ifayile
Unokukhetha uku yenza umboniso ngendlela othanda ngayo, Dibanisa nengoma yomsindo kuyo. Emva kokuba ulungile, kufuneka uthumele ngaphandle ifayile ukuyigcina kwi-PC yakho.
Cofa ku "Yenza ividiyo”Kwaye ukhethe ifolda apho ufuna ukugcina ifayile. Ekuphela kwento engekhoyo kukucofa u "Gcina", yiyo ke leyo. Umboniso wethu wePowerPoint ugcinwe kwifomathi yevidiyo kwaye sikulungele ukuyilayisha kwisiteshi sethu seYouTube.
Ngenisa ifayile kwiYouTube
Emva kokudala kunye nokuthumela ngaphandle isethulo sePowerPoint kwifomathi yevidiyo inyathelo elilandelayo liya kuba layisha kwisiteshi se-Youtube. Apha sichaza amanye amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Vula Youtube kwaye ungene ngeakhawunti yakho kaGoogle
cofa kwikhamera yekhamera yevidiyo ebonakala phezulu ngasekunene kwesikrini.
Cofa ku "Ngenisa ividiyo”Ukukhetha ifayile ofuna ukuyifaka kwisitishi. Ungarhuqa ngokuthe ngqo kwifolda apho uyigcinileyo.
Lindela ividiyo gqibezela ukungena eqongeni. Oku kungathatha imizuzu eliqela kuxhomekeke kubungakanani befayile.
Gqibezela ulwazi lwevidiyo emva koko ucofe ku "shicilela".
1 Thumela ngaphandle umboniso njengevidiyo
2 Ngenisa ifayile kwiYouTube
Beka iswayipha kwi-Instagram. Ndiyenza njani?
Ungayifumana njani iakhawunti yakho ye-Twitter?